Mividiana vovoka azafady Melengestrol (2919-66-6) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Hormones vehivavy / Melengestrol acetate poids
SKU: 2919-66-6. Sokajy: Hormones vehivavy
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filahatry ny môtera melengestrol acetate (2919-66-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Melegestrol acetate poids (INN, BAN) dia fanafody an-kira sy antineoplastic steroidal izay tsy nividianana mihitsy. indraindray ny fandaniana ny MGA. Tsy ankatoavina ho an'ny olona izany, ary ampiasaina ho toy ny sakafo fanampiny hampandrosoana ny fitomboan'ny omby. ary ampiasaina ho toy ny fanabeazana aok'izany ho an'ny biby babo ao anaty zoos sy fialofana hafa.
Melegestrol acetate video volo
Melegestrol acetate poids ireo karazana fototra
Name: Melegestrol acetate poids
Formula Molecular: C25H32O4
Meny fitetezana 396.52
Alpha D23 -127 ° (c = 0.31 amin'ny chloroform)
More Details Momba ny vovony azafady Melengestrol izay tianao ho fantatra
Melegestrol acetate poids, Heifermax, MGA
Ny fampiasana ny vovony azafady Melengestrol
Ny steroid (mega) megangestrol (MGA) dia orinasa mavitrika amin'ny algorithm ampiasaina mba hampitomboana ny taham-pivoarana sy ny fihenan'ny fiovam-po. Ny fanesorana ny oestrus amin'ny tsiranoka dia tsy ankatoavina ho an'ny karazana voankazo rehetra. Ny MGA no hany fitsaboana amin'ny karazany omena azy. Ny dosage azo ekena dia 0.25 amin'ny 0.50 mg / heifer / day. Ny vovobonin'ny acetate Melengestrol dia natolotra nandritra ny vanim-potoana haingam-pandeha / farany, matetika 90 hatramin'ny andro 150. Ny fanesorana ny andro 2 talohan'ny famonoana dia ampiharina amin'ny biby rehetra izay omena ny MGA.
Ny vovo-pandrefesana Melengestrol dia novaina teo aloha teo amin'ny fivorian'ny 54 sy ny Komity, ary nomena vahaolana farafahakeliny (MRLs). Ireo MRL tsy maharitra dia 5 μg / kg ho an'ny tavy bovine sy 2 μg / kg ho an'ny atin'ny bain. Rehefa nahatratra ny fanapahan-keviny mikasika ny MRL dia notsidihan'ny Komity ireto fotokevitra manaraka ireto:
- Nisy ADI ny 0-0.03 μg / kg ny lanjan'ny vatana, izay mitovy amin'ny ADI ambony an'ny 1.8 μg amin'ny
- Ny tavy sy ny fery ihany no mifantoka amin'ny fatran'ny marika izay azo zaraina amin'ny fomba mahazatra; fomba
Ny fatran'ny quantification lehibe kokoa noho ny 0.3 μg / kg dia tsy azo atao ny mamela ny isam-pandrefesana any amin'ny hozatra
Ireo biby voapoizina amin'ny dosie dosier avy amin'ny vovon-tsakafo Melengestrol.
- Ny mpanohana dia tsy nanolotra fomba amam-panao mety ho an'ny fanaraha-maso.
Noho izany dia nanolo-kevitra ny MRL tsy maharitra ny komity ary nangataka ireto fampahalalana manaraka ireto:
- Fitsaboana mampifanaraka ny fikajiana ny voka-pandrefesana azafady ampiasain'ny Melengestrol ao amin'ny atiny sy ny tavy.
Ho valin'ny fangatahan'ny Komity, nanome ny fomba fiasa azo ekena ho an'ny valin'ny 58th ny mpanohana
Ny effet d'acetate Melengestrol efficace
Ny vokatry ny acetate oral menningenyl (MGA) amin'ny asa atao amin'ny oviana dia efa nodinihina tamin'ny tavoahangy 264 sy ny ombivavy. Ny totalin'ny 98 mpandray anjara dia nahazo 0.4 mg MGA isan'andro nandritra ny fotoana fohy (18 hatramin'ny 32 andro), ary ny fatran'ny ovaire dia voafaritra amin'ny palpation rcta. Raha nihena ny vidin'ny corpus luteum avy amin'ny 76% ka hatramin'ny 10%, dia nihena hatramin'ny inconnu% 56% ny taham-pahavitrihana azo tsapain-tanana. Mitombo ihany koa ny haavon'ny volony amin'ny fotoana. Ny tsiranoka azo avy amin'ny boron-koditra dia voatifitra arakaraka ny karazam-pandrefesana, izay nohazavaina fa vokatry ny estrogenic sy ny zava-nitranga nandritra ny fahasimban'ny corpus luteum, na dia nanakana ny estrus sy ovulation aza ny fitsaboana MGA.
Ny totalin'ny ombidia ombidia 166 dia nampiasaina nandritra ny fandalinana maharitra ny fitsaboana MGA (105 hatramin'ny andro 116). Nisy fitomboana (P <0.05) hita tao amin'ny lanjan'ny fluid follicular, indrindra indrindra avy amin'ireo saribakoly lehibe indrindra amin'ireo ovy. Ny fatran'ny estrogen dia mampiseho koa ny fahamaotiana, ary ny lanjan'ny adrenalina amin'ny fitomboan'ny tsindrona MGA miohatra. Aorian'ny fitsaboana amin'ny MGA, dia mihena ny lanjan'ny adrenalin'ny tavy. Ny dingana tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny asa mihetsika dia toa eo akaikin'ny 0.4 mg an'ny MGA isan'andro / ombivavy.
Fampitandremana momba ny vovony acetate Melengestrol
Mialà amin'ny sakafo, zava-pisotro ary biby sakafo.
Aza atao anaty rano.
Io fitaovana io sy ny fitoerany dia tokony horoahina amin'ny fomba azo antoka.
Mitafy akanjo fiarovana.
ataovy madio ny tany sy ny zavatra rehetra voapoizina amin'ity fitaovana ity, ampiasao rano sy savony.
Raha nitelina izy dia mifandray amin'ny Dokotera na ny Poizina momba ny Informatika. (asehoy ity container na label ity).
Aza mibaribary - mahazo torolàlana manokana alohan'ny fampiasana azy.
Esory amin'ity tahirin-tsolika ity sy ny fitoeran-javatra ao amin'ny toeram-pamokarana mahatsiravina na manokana.
Mampiasà fanenan-damba mifanentana mba hisorohana ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Aza avela hivoaka any amin'ny tontolo iainana. Jereo ny torolàlana manokana / Fandraketana fiarovana.
Melengestrol acetate marketing vinaingitra
Hoentina amin'ny hoavy ho avy
Ahoana no hividianana vovony azafady Melengestrol avy any AASraw
Melengestrol acetate Recipes